KDE Unganidzo yakabviswa kubva kuGoogle Play nekutyora mutemo | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro, Google yakaita sarudzo yekubvisa KDE Ungano kubva kuGoogle Store nekuti kushandiswa kutyora mutemo achangobva kuiswa nezve mvumo yeSMS uye kufona matanda, iyo iyo mushando inoda kupa chiitiko chakazara.
Kune avo vasati vaziva KDE Connect Ndinogona kukuudza izvozvo izvi zvinovatendera kuti vabatanidze foni nekombuta iyo inomhanya chirongwa chisina zita, zvichivabvumira kuti vataurirane kuburikidza neisina waya kubatana.
Izvi zvinokutendera iwe kuti uwane notisi dzefoni paPC, tarisa nhare yebhatiri yefoni, govana mafaera uye zvinongedzo pakati pemidziyo, fonera foni yako, verenga zviziviso, kana kubata uye kuratidza mameseji
KDE Unganidzo inopa iyi seti yezvinhu:
Yakagovaniswa clipboard: kopi uye unama pakati pemidziyo yako.
Goverana mafaera nema URL pakombuta yako kubva kune chero application.
Gamuchira zviziviso zveinouya mafoni uye mameseji meseji paPC yako.
Virtual Touchpad - Shandisa yako nharembozha seye yekubata pakombuta.
Notification sync: verenga zvako Android Notices kubva kudesktop.
Multimedia kure kudzora - Shandisa foni yako seremote control yeLinux media player.
Kubatana kweWiFi: Hazvidi USB kana bluetooth.
Kuguma-kumagumo TLS kunyorera - Ruzivo rwako rwakachengeteka.
Ndokumbira utarise kuti iwe unofanirwa kuisa KDE Unganidza pakombuta yako kuti ichi chishandiso chishande uye chengeta iyo desktop vhezheni ihambisane neiyo Android vhezheni yezvazvino maficha ekushanda.
Iri svondo icho chikamu cheyakavhurwa sosi purojekiti uye iripo kuvonga kune vese vanhu vakapa kwairi. Naizvozvo, zvinokwanisika kutora yayo sosi kodhi kana iwe uchida kuidzidza kana kuishandisa maererano nerezinesi, hongu.
1 Google inosarudza kubvisa KDE Unganidzo
1.1 KDE Unganidzo inodzokera kuGoogle, asi pasina iko kushanda kweSMS
Google inosarudza kubvisa KDE Unganidzo
Pamberi pechisarudzo neGoogle, kubvisa KDE Unganidzo kubva kuGoogle Store, Albert Vaca Cintora (ndiani anochengeta KDE Unganidzo) Akataura mune tweet kuti:
KDE Unganidzo yakabviswa kubva kuGoogle Play nekutyora zano rayo idzva rezvikumbiro zvinowana SMS. Iyo bumbiro ine yakasarudzika kusarudzika kune inoenderana application (senge KDE Unganidzo), asi ichiri kubviswa uye Google haigone kutaurwa nayo.
Google Play ikozvino inoganhurira mvumo yekuwana kufona uye matanda eSMS kunze kwekunge zvichidikanwa yeiyo Android application. Deredza mashandisirwo emvumo ine njodzi kana zvakavanzika, zvinosanganisira danda rekufona kana mapoka emvumo eSMS.
Kana iko kunyorera kusingade kuwana kune yekufona danda kana maSMS mvumo, izvi zvinofanirwa kubviswa kubva kuchishandiso faira rekuratidzira.
Y Albert Vaca Bhandi inoti:
Google inongopa mafomu-enzira imwe chete kuti ubate navo. Ini ndakazadza mafomu maererano neiyi shanduko yezano (kusanganisira iya yavakange vatumira kune zvavakakumbira pasati zano ratanga kushanda), asi havana kuzombowana tsananguro yekuti sei KDE Unganidzo isingakwaniswe kutorwa seshamwari yekushandisa.
Iko hakuna kana nzira yekutaura nemunhu paGoogle. Ini ndinokutengesa iwe kuponesa yakawanda pane vatengi.
KDE Unganidzo inodzokera kuGoogle, asi pasina iko kushanda kweSMS
Kunyange zvakadaro hapana mhinduro kubva kuGoogle, Albert Vaca Cintora akati achakurumidza kuburitsa vhezheni yeKDE Unganidzo pasina basa reSMS.
Vanoverengeka vashandisi vechishandiso vakatoratidza kutsamwa kwavo, tichitenda kuti Google yaishandisa zvisizvo nzvimbo yayo.
Mumwe wavo, mugadziri wekushandisa, akatoshamisika kuona kuti KDE Unganidzo yakabviswa apo chikumbiro chake, icho chakaita zvakafanana chinhu uye chikumbira mvumo imwechete, ichiri paGoogle Play.
Finalmente Albert Vaca Cintora akataura kuti vhezheni yeKDE Unganidzo ichave yatovepo muiyo Play Store pasina basa reSMS. Ndiani anoda iyo yakazara app inogona kutorwa kubva kuF-Droid.
Kuti zvinhu zvive nani, iyo GooglePlay koni inonditumira iko kukanganisa kwemukati. Ini handikwanise kurodha vhezheni pasina SMS kutsigirwa. Zvichakadaro, vashandisi vatsva havagone kurodha KDE Unganidzo. Basa rakanaka google. Akadaro Albert Vaca Cintora
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE Unganidzo yakabviswa kubva kuGoogle Play kutyora mutemo
Mazuva ese vanopenya zvekuti ndinorega kushandisa google services. Ndine Android pane yangu mbozhanhare uye Kdeconnect chinhu chakakosha kunyorera, nekuti ini ndinoshandisa yangu laputopu zvakanyanya kupfuura foni yangu kune zvese (mazuva ese zvinondipa more allergies ...)
Ndanga ndichifunga kuvhara yangu gmail maakaunzi kwemazuva mashoma uye kuyedza kuisa iyo foni izere neiyo shoma yegoogle. (Yakashata Plasma nhare haisati yakamira, iro zuva rinoitika….)
Daring clown, asi avo vakatanhamara Google Hangouts neGoogle Allo vanoita chero chavanoda neSMS uye ID & kufona matanda. Parizvino ndinozvitaurira ivo pachavo kuti vaone kuti vanopindura.